अंग्रेजले निर्माण गरेको झुलाघाट पुलको कथा – Mahilajagaran
अंग्रेजले निर्माण गरेको झुलाघाट पुलको कथा
तुइन काटेर जयसिंह धामीलाई बेपत्ता पार्नु एसएसबीको ठूलो गल्ती
केही समय अगाडि भारतीय एसएसबीद्वारा तुइन काटिएको कारण महाकाली नदीमा खसेर एक नेपाली युवाको मृत्युको समाचार निकै छायो । भारतीय एसएसबीका जवानहरुले फलामे आरा बोकेर हिड्ने तथा जथाभावी बाँधिएका तुइन काट्दै हिड्ने त्यस क्षेत्रको लागि कुनै नौलो घटना होइन । तुइन काटेर एसएसबीका जवान गए पछि फेरी तुइन बाँधेर यात्रा गर्न त्यहाँका जनता बाध्य भएको दशकौ भइसकेको छ ।
ब्याँस गाँउपालिकाका जनताहरुको बाध्यताका कथाहरु भने कसैले कतै लेखिदिएन । आफ्नै देशमा बसेर आफ्नो गाउँबाट सदरमुकाम आउन अनधिकृत रुपमा महाकाली नदी तरेर भारतीय बाटो प्रयोग गरेर झुलाघाटबाट फेरी नेपाल प्रवेश गरेर सदरमुकाम पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । सधै यसरी नै बाँधिएका तुइन काटिने भए पनि कोही तुइनमा यात्रा गरिरहेको समयमा तुइन काटिदैनथ्यो ।
तुइनबाट भारतीय सीमामा प्रवेश गरे पछि एसएसबीका जवानले पिट्दथे । तर त्यस दिनको दुखद घटनाले तुइन तर्दै गरेका जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता हुन पुगे । हुन सक्छ तुइनमा कोही भएको देख्दै देखेनन् वा सधैको अटेरीले एसएसबीका जवान बढी नै उग्र भएका पनि हुन सक्छन् । जे जस्तो कारण भए पनि मानिसको मृत्यु नै हुने गरि तुइन काटिदिनु भने भारतीय एसएसबीको ठूलो गल्ती थियो ।
यी त भए पक्की पुल वा झोलुङ्गे पुल नहुँदा महाकाली नदी तर्नु पर्ने बाध्यताका कुरा । तर महाकाली नदीको झुलाघाटमा पक्की पुलको माग भएको धेरै समय भए पनि नेपाल सरकारबाट पक्की पुल बनाइदिने केवल आश्वासन बाहेक त्यहाँका जनताले अरु केही पाएनन् । साथै ७ नं प्रदेशका बिभिन्न ग्रामिण क्षेत्रबाट सदरमुकाम आउन समेत तुइन तथा झोलुङ्गे पुलहरु बनाइएका छैनन् । जसले गर्दा भारतीय सीमा प्रवेश गरेर मात्र सदरमुकाम आउन बाध्य छन् ।
यदि झुलाघाटमा गाडी नै गुडाउन मिल्ने पक्की पुल हुने भए नेपाल तर्फ भ्रमण गर्न आउने भारतीय पर्यटकको संख्या निके बढ्ने थिए । जसले गर्दा समग्र ७ नं प्रदेशको नै आर्थिक समृद्धीको आधारहरु तैयार हुन्थे । तर अफसोस देशको पाँच पटक सम्म प्रधानमन्त्री बनेका हालका प्रधानमन्त्री नै यस क्षेत्रका भए पनि सुदुर पश्चिम प्रदेश विकासको नाममा निकै पछाडि रहेको छ ।
अंग्रेजको समयमा इष्ट इन्डिया कम्पनीले बनाइदिएको महाकाली नदीको नेपाल भारत सीमाको झुलाघाटको पुल बेला बेलामा भारतीय पक्षले मर्मत गरिरहे पनि नेपाल सरकारले कुनै पक्की पुल बनाउने योजना नै बनाएन । दुइ दशकदेखि निरन्तर दवाव दिदै आए पनि अझै सम्म कुनै पक्की पुल बनाउने योजनाको सुरुवात भएकै छैन । महाकालीको वारी र पारी झुलाघाटको मात्र सम्बन्ध छैन । यहाँ त समान संस्कृति मात्र होइन रोजीरोटीको लागी पारी पुग्नेहरु पनि मनग्य छ । साथै वारी र पारी रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि छ । कतिपयको पारी ससुराली छ भने कतिपयको वारी ससुराली छ ।
तर यि सम्बन्धहरु भन्दा माथि दुइ देशको अन्तराष्ट्रिय सीमा हुनुको कारणले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हप्की र दण्डा खानु पनि सामान्य झै हुने गर्दछ । झुलाघाट भन्दा उत्तरमा रहेका मालघाट तथा अन्यत्रबाट तुइनमा महाकाली तर्नुलाई भारतीय एसएसबीले अनधिकृत रुपमा लिने गर्दछ र प्रवेश गर्नेलाई एसएसबीले दुख दिने गर्दछ । जसले गर्दा त्यहाँका जनता अस्थायी तुइन राख्न बाध्य हुने गर्दछ । नेपाली भूभागमा पक्की रुपले तुइनको एक छेउ बाँधिएको भए पनि भारतीय सिमामा भने रुखमा बाँधेर राखिन्थ्यो । सिमामा ड्युटीमा रहेका एसएसबीेले यसरी बाँधिएका तुइन काट्ने गर्दथे ।
झुलाघाटको इतिहास हेर्दा निकै रोचक लाग्छ । महाकाली नदी जतिसुकै भयावह भए पनि यो ठाउँमा पुगेपछि निकै साँघुरिएको थियो । यति साँघुरो थियो कि मानिसहरु जुवा बाँधिएको गोरु लिएर यस स्थानबाट महाकाली तर्दथे । जसले गर्दा यो ठाउँलाई जुवाघाट भन्ने गर्दथे । भारतमा आएका अंग्रेजहरुको इष्ट इन्डिया कम्पनीले यस स्थानमा झुला अर्थात झोलुङ्गे पुल राखिदिए । जसले गर्दा मानिसहरु झुलाघाट भन्न थाले । झोलुङ्गे पुल बने पछि भारत तर्फको पिथौरागढमा झुलाघाट नजिकै झुलाघाट बजार बस्यो । नेपाल तर्फ पनि झुलाघाट नै भनिने गरिन्छ ।
बहादुर शाहको पश्चिम नेपालको विजय अभियानमा गढवालसम्म सीमा पुग्दा यहि स्थानमा रहेको पिथौरागढमा गोर्खालीको किला थियो । वि.स. १८४६ मा वीर गोर्खालीहरुले बनाएको गोर्खा किला अझै पनि पिथौरागढमा ऐतिहासिक थलोको पहिचान बनाएर बसेको छ । निकै लामो समय सम्म गोर्खाली फौज रहेको हुँदा यस वरपरको क्षेत्रमा नेपालीहरुको निकै बाक्लो बस्ती नै छ । पछि इष्ट इन्डिया कम्पनीसंगको नेपालको हार भए पछि वि.स. १८७२ मंसिर १९ मा सुगौली सन्धी भए पछि भने यो किल्ला इष्ट इण्डिया कम्पनीको मातहतमा आयो र यसको नाम लण्डन फोर्ट राखियो ।
जसलाई भारत स्वतन्त्र भए पछि भने पिथौरागढ किलाको रुपमा रहेको छ । इष्ट इन्डिया कम्पनीको पिथौरागढमा प्रवेश पछि महाकाली नदीमा बि।सं। १८८६ मा यो झोलुङ्गे पुल बनाइदिएका थिए । भारतीय भाषामा झोलुङ्गे पुललाई झुला भनिने तथा नदीको साँघुरो भाग भएको हुँदा यहाँ घाट रहेको हुँदा यो झोलुङ्गे पुल तथा यो ठाउँको नाम नै झुलाघाट रहन गयो ।
पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना अन्तर्गतको ३१५ मीटर अग्लो बाँध यदि बन्यो भने यस झुलाघाट क्षेत्र नै डुवानमा पर्न सक्ने भन्ने कारणले पनि व्यापक बिरोध भइरहेको छ । हुन त कुनै पनि बाँधले केही क्षेत्र डुवानमा पर्ने भए तापनि सिङ्गो वस्ती नै डुब्ने गरि आयोजना सायद पुरा गरिदैन होला ।